ahoana no mba hiala amin'ny yukon volamena casino
ahoana no mba hiala any mega handresy casino
ahoana no mba hiala amin'ny sendika casino
Daiwa Fiarovana Ny Vondrona Inc., namoaka tatitra tamin'ny alakamisy miantso ny 2016 fanokafana ny vaovao baka terminal amin'ny Pac Eo, Taipa azo atao "game changer ho Cotai." Araka ny tatitra, ny vaovao baka ho afaka manazava 40 ferries isaky ny ora izay tombony ny efatra ferries isaky ny ora ny tahan'ny vonjimaika terminal varavarana manaraka dia afaka ny hiatrika ahoana no mba hiala vola amin'ny 888 casino.
Ankoatra izany mba hampitombo ny famokarana, ny vaovao terminal dia manasongadina ny Taipa-Cotai faritra ara-barotra voalohany tao helipads manampy fipetrahana toerana ho an'ny mpandeha mitondra ara-barotra angidimby ny asa ahoana no mba hiala amin'ny yukon volamena casino. Daiwa hoy ny ara-barotra helipad ao Makaô saikinosy ny tena baka terminal manana tombontsoa ao an-tanàna afovoan-trano filokana ahoana no mba hiala any mega handresy casino. Ny fohy niraharaha manampy mba hahabetsaka ny mponina ny fe-potoana casino mpanjifa afaka mandany amin'ny latabatra, ary "Ny avo arakaraka ny ireo mpanjifa mandeha any Makaô alalan'ny helikoptera, ary mifototra amin' ny taratasim-bola, ireo mpitsidika hizara ny toetra mahazatra: izany hoe, ny tsy fahazakana ny fotoana, ny fandehanana manohitra ny [ho any Makaô] amin'ny alalan'ny ferries, mandeha amin'ny alalan'ny helikoptera ny mamonjy ny fanondroana ny 40-45 minitra isaky ny diany", Daiwa voalaza ao amin'ny taratasy voalaza ao amin'ny ggrasia.com ahoana no mba hiala amin'ny sendika casino.
Tamin'ny 8 septambra Susana Wong soi iray ny Olona, tale ao amin'ny governemanta ny tafika an-Dranomasina sy ny Rano Birao, dia nanamafy fa Pac Amin'ny baka terminal asa voalohany manomboka ny daty dia indraindray tamin'ny afovoan'ny taona manaraka, fito taona lasa tany am-boalohany voalahatra fanokafana ny daty ny taona 2009, ary mihoatra ny in-dimy inona ny tetikasa am-boalohany budgeted ho hollywood casino racino dayton ohio. Amin'ny Taipa Nosy akaikin'ny any macau, ny seranam-piaramanidina ny Pac Amin'ny baka terminal ny tanjona voalohany dia ny handraisana mpizaha tany fifamoivoizana mivantana Cotai resorts..